Ihe na 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na 4-DHEA, gallery. O nwere 0 Comment.
Ụdị Mkpụrụkpụ: C19H28O2
4-DHEA ntụ ntụ, CAS 571-44-8, a makwaara dịka 4-androstene-3b-ol, 17-one, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy -D4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-one. 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) bụ steroid nke bụ isomer nke 5-dehydroepiandrosterone.
Kedu ihe bụ Prohormone?Atụmatụ bụ ihe ngwọta bara uru maka nsonaazụ kacha mma. Ihe omumu bu ogige nke ana ekwu okwu. Ihe omuma putara na onyinye ndia bu uzo ozo maka hormone. Na nke ha, ha adighi irè. Ọrụ ha bụ ikesa site n'ọbara. Ozugbo a gbanwere prohormone na hormone, ọ na-achịkwa ụkwara hormone. Chee echiche na prohormone bụ pro-protein nke na-atụgharị na protein iji melite arụmọrụ egwuregwu na ahụ ike.
Desogestrel Powder For Sale: Nyocha & Ụdị & Mmetụta Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ